Paymentzọ ịkwụ ụgwọ ịntanetị kachasị eji eme ecommerce | ECommerce ozi ọma
Paymentzọ nkwụnye ụgwọ ịntanetị kachasị eji
Ekele diri online ịzụ na n'ire saịtị Ekepụtawo ntụkwasị obi na ụzọ dị mfe iji zụọ ahịa na saịtị ndị a, ma ọ bụ iji zụta ihe ma ọ bụ ree ma nata ego maka ha. Akụkụ nke ọganihu na e-commerce ihe ịga nke ọma Ọ bụ n'ihi usoro ndị a dị omimi na ntụkwasị obi. Ọzọ anyị ga-ewebata gị ole na ole ụzọ ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị na i nwere ike iji taa.
2 Ebe E Si Nweta ma ọ bụ kaadị debit
3 Nkwụ ụgwọ ịntanetị site na mkpanaka gị
4 Ego mebere
Ikekwe usoro kacha mara amara n'ụwa niile, PayPal bụ ụlọ ọrụ tọrọ ntọala na 1998 ma nweta ya site na otu nnukwu saịtị e-azụmahịa na ụwa, eBay. N'ebe ọwụwa anyanwụ usoro ịkwụ ụgwọ na - enyere aka idobe nzuzo nke ụgwọ gị ma ọ bụ kaadị kredit gị, ị ga - enye email gị ma na nke a ị ga - akwụ ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ịchọrọ, email ga - ejikọ na kaadị akwụmụgwọ gị, mana onye na - ere ahịa agaghị enwe nọmba kaadị gị, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime usoro ịkwụ ụgwọ a pụrụ ịtụkwasị obi na ụwa.
Ebe E Si Nweta ma ọ bụ kaadị debit
E-azụmahịa saịtị na-enye ọtụtụ nhọrọ dị nchebe ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na yaOtu n'ime ndị a na nke kachasị bụ ịbanye ozi nke kredit gị ma ọ bụ kaadị debit nke a ga-akwụ ụgwọ achọrọ, usoro a abụghị ntụkwasị obi dị ka PayPal, mana n'onwe m enwetụbeghị aghụghọ.
Nkwụ ụgwọ ịntanetị site na mkpanaka gị
Enwere ọtụtụ ngwa dị iche iche nwere ike inyere anyị aka ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ nke ọma ma site na nkatụ ole na ole na ekwentị anyị, ụlọ ọrụ dịka Google Wallet ma obu Apple Pay, bụ ihe atụ magburu onwe ya nke otu ụzọ ịkwụ ụgwọ si malite site na teknụzụ ọhụụ.
N'oge ịrị elu nke ịntanetị na e-azụmahịa na saịtị azụmahịa ịntanetị, E mepụtara ụzọ ọzọ nke nwere ike ọ gaghị ama ọtụtụ mana mana n'otu ụzọ ahụ ọtụtụ ndị ọzọ na-eji, ana m ekwu maka bitcoin, ego nke nwere nnukwu uru ma jiri ya mezue azụmahịa n'ọtụtụ saịtị ntanetị e-commerce.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Paymentzọ nkwụnye ụgwọ ịntanetị kachasị eji
Kedu ngwa ahia e-commerce?
Mbido kachasị mma nke 2017